UEFA Oo Go'aan Ka Gaadhay Garoonka Ay Ka Dhacayso Ciyaarta Man City & Real Madrid - Gool24.Net
UEFA Oo Go’aan Ka Gaadhay Garoonka Ay Ka Dhacayso Ciyaarta Man City & Real Madrid
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa go’aan ka gaadhay garoonka lagu ciyaari doono kulanka Manchester City iyo Real Madrid ee lugta labaad ee wareegga 16ka tartanka Champions League.
UEFA ayaa go’aamisay in wareegyada Siddeed-dhamaadka, semi-finalka iyo finalka lagu ciyaaro waddanka Portugal, iyadoo loo qaabaynayo nooc ka duwan sidii hore oo garoomo madhana lagu ciyaarayo, laakiin afar kulan oo ka hadhsanaa wareegga 16-ka ayay hadal ka taagnaayeen sida ay suurtogal ku noqon karayso in lagu ciyaaro garoomada naadiyadii marka hore martida ahaa.
Murug uu keenay sharciga xakamaynta caabuqa Korona ee dalalku hirgeliyeen ayaa hubanti la’aan ka dhigay in Manchester City ay awoodi doonto inay garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabisho Real Madrid maadaama UK ay soo rogtay in 14 maalmood oo karantiil ah ay galaan dadka dalkaas imanaya. Laakiin UEFA ayaa ugu dambayn sheegtay in City ay qaabbili doonto Real Madrid oo lugtii hore ee garoonka Santiago Bernabeu ay ku garaacday 2-1.
Barcelona ayaa iyaduna waxay Camp Nou ku martigelin doontaa Napoli, halka Bayern Munich iyo Juventus ay garoomadooda kusoo dhoweyn doonaan Chelsea iyo Lyon.
Bayern Munich ayaa haysata faa’iido guuleed oo ay kasoo gaadhay lugtii hore ee ay Stamford Bridge ugu tagtay Chelsea, taas oo ay kaga soo adkaatay 3-0, halka Juventus ay lasoo kulantay guul-darro 1-0 ah safarkeedii Faransiiska ay ugu tagtay Lyon.
Kooxda reer Spain ee Barcelona waxa ciyaartii Napoli ay martida ugu ahaayeen ay iyaguna lasoo laabteen barbarro 1-1 ah, halka Real Madrid garoonkooda Bernabeu looga badiyey 2-1 oo ay City guusha kula laabatay England.
UEFA oo la tashatay dhakhaatiirta kooxaha iyo ciayartoyda, waxay ugu dambayntii go’aamisay in kulamada ka hadhay tartanka gaar ahaan lugta labaad ee wareega 16ka lagu soo ciyaarro garoomadii marka horeba qorshaysnaa kaddibna la iskugu tago waddanka Portugal.